Ndị na-emepụta ngwa na ndị na - eweta ngwa ngwa - China Application Factory
Mmiri na-ekpuchi mmiri akara teepu maka uwe
A na-eji akwa mmiri na-ekpuchi mmiri ma ọ bụ ngwa eletriki dị ka ụdị teepu maka ọgwụgwọ akwa mmiri. Ugbu a, ihe ndị anyị na-eme bụ pu na akwa. Ka ọ dị ugbu a, usoro nke itinye eriri mmiri na-adịghị mma maka ọgwụgwọ nke mmiri mmiri na-ewu ewu ma na-anabata ebe niile ...
PEVA onuete akara teepu maka disposable echebe uwe
Ngwaahịa a bụ ngwaahịa anyị kachasị ere ebe ọ bụ na ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-19 na 2020. Ọ bụ ụdị PEVA mmiri na-enweghị mmiri nke ejiri ihe mejupụtara, nke a na-eji maka ọgwụgwọ mmiri na akwa akwa akwa. cm na 2cm, ọkpụrụkpụ 170 micron. Tụlee ...
Ọ bụ a TPU na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film nke adabara bonding nke ịkwanyere, keakamere akpụkpọ anụ, ákwà, eriri na ihe ndị ọzọ na-achọ ala okpomọkụ. Nọmalị ọ na-eji na-Nlụpụta Pu ụfụfụ insole nke bụ gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na-abụghị na-egbu egbu. Tụnyere na mmiri mmiri mama bonding, nke ...
TPU na-ekpo ọkụ gbazee mpempe akwụkwọ maka insole
Ọ bụ ihe thermal PU fusion film na translucent anya nke a na-ejikarị etinyere na bonding nke akpụkpọ anụ na akwa, na ubi nke akpụkpọ ụkwụ ihe nhazi, karịsịa nkekọ nke Ossole insoles na Hypoli insoles. Infọdụ na-emepụta insole na-ahọrọ ala agbaze okpomọkụ, ebe ụfọdụ tupu ...
Ọ bụ translucent thermal polyurethane fusion mpempe akwụkwọ nke kwesịrị ekwesị maka bonding nke ibu eriri, akpụkpọ anụ, owu ákwà, iko eriri osisi, wdg dị ka N'èzí uwe akwa / mkpọchi uwe / akpa n'akpa uwe / okpu-ndọtị / kpara ụghalaahia. O nwere akwukwo di nkpa nke puru ime ka odi ya nma ichota ...
Ngwaahịa a bụ nke usoro TPU. Ọ bụ ihe atụ emere maka ọtụtụ afọ iji zute arịrịọ ndị ahịa na-agbanwe na njirimara mmiri. N’ikpeazụ ọ na-aga na steeti tozuru etozu. nke kwesịrị ekwesị ka ọtụtụ ndị mejupụtara nke enweghị nkebi uwe ime, bras, sọks na na-agbanwe akwa na ...
EVA ọkụ gbazee nrapado film bụ isi, uto na-abụghị na-egbu egbu. Enwere polymer dị ala nke bụ ethylene-vinyl acetate copolymer. Agba ya bụ odo odo ma ọ bụ ntụ ntụ ọcha ma ọ bụ granular. N'ihi ntakịrị crystallinity ya, ịdị elu ya dị elu, na ụdị ọdịdị roba, ọ nwere polyethyle zuru ezu ...
EVA ọkụ gbazee nrapado web film
W042 bụ mpempe akwụkwọ ntanye na-acha ọcha dị ọcha nke ihe eji eme ihe. Site na njide dị ukwuu na usoro pụrụ iche, ngwaahịa a na-akpa oke ume. Maka ụdị a, o nwere ọtụtụ ngwa nke ọtụtụ ndị ahịa nabatara. O kwesịrị ekwesị maka njikọta nke ...
HD371B sitere na ihe TPU site na mgbanwe ụfọdụ na fomular. A na-ejikarị ya na eriri oyi akwa mmiri na-enweghị mmiri, akwa uwe na-enweghị ntụpọ, akpa na-enweghị ntụpọ, mkpọchi mmiri na-enweghị mmiri, ihe mgbochi mmiri, ihe na-enweghị ntụpọ, uwe ndị nwere ọtụtụ ọrụ, ihe na-atụgharị uche na mpaghara ndị ọzọ. Mejupụtara pr ...